Waajjirri Xiyyarii Itiiyyoophiyyaa Gurguramee - Caboowanci.com-Oromia
December 26, 2017 December 26, 2017 Nadhani	0 Comments OBS, OLF, OMN, ONM
Mootummaa Wayyanee sababa rakkoon ishii muudateen qabeenyaa biyyaatiin qabdu hundaa walitti qabidde garguruudhaan samaa akka jirtuuf akka ture beekamaadha. Amma hardhaati Warshaaleen biyya keessa jiran tokko utuu hin afiin Invastaroota biyya alaaf akka gurguramaa turan ni yaadatama. Haa ta´uu malee yeroo amma kana keessatis rakkoon ammana hin jedhaminne karaa jijiirtaa maalaqa alaa ykn dollarii (Foreing Currency Exchange Rate Crisis) balaa guddaa keessa galichee jira.
Meeshaa adda addaa Warshaalotaafii Kaamphaanii toko tokkoof alaa ol galfachuu hin dandeenyee. Akkasumas Maalaqa Bankii Adunyaa irraa fi China irraa liqeefachaa turan deebisuu hin dandeenyee. Gutuumaan guutuutii Kamphaaniifii nagadinnii biyyatii keessati ta´aa ture harka Wayyanee TPLF fi Kaardoota isanii waan ta´eef haallii amma isaan keessa jiran itti cimee waan isaan hoorissa jiruuf maalaqa isaanii Baankii Dubai fi Switzreland akkasumas Baaknolii biroo keessati kuufamaa jira.
Kana hundaa irraa kan ka´ee ittuma yaadameefii qabiyyee biyyatiin qabduu saamuuf jechaa Waajjirri Ethiopian AirLines Kun harkii Parsentiin Afurtaminni (40 %) Mootummaa biyya Gambia dhaaf gurguramaa jira. Egaa Warishaaleen biyya keessa jiran hundaa erga gurguramanii dhumatee booda biyyatiidhumaayyuu kan bituu China ta´uun ishii waan hin oollee dhaa.
Maalaqaa Maqaa karaa fi Investimeentii babalidhsuu jedhuun China irraa fi Baankii Adunyaa irraa liqqeefatanii ofiin Baankii Alaa keessati maqaa Maatiifii Sanyii isaanitiif kuufachaa jiru. Garuu yoo moo akka itti hin gaafataminnee fakkeesuufi jechaa Projaktii daandii hojjachuuf jechaa qalqabuu. Kontraatonnis hatuudhuma akka isanii waan ta´anii isaniif kennama. Karaan ykn daandiin isaan jedhan sun ijaaramee ji´a otuu hin guutiin Lolaa fi sababa adda addaatin yeroo cabuu akkasumas hojii ala ta´uu argaa jirra.
Kanaafuu hardhaa Wajira kanaafi kkf hundaa Mootummaan Naannoo Oromia fi dhimmi kun ilaalatuu tarkaanfii tokko akka fudhachuu qabuufi Saamicha keessumaayyuu Warishaalota Naannoo Oromia keessa jiran hundaa akka eegumissi gudaadhan godhamuu barbachisaadha.
Keessayyuu Waajiri Xiiyyaarri Itiyyophiyya ( Ethiopian Air Lines) Kun bakka yeroo ammaa kanati Mootummaan Naannoo Oromia cimee harka isaa keessa galfachuu qabauudha. Sababiin isaa moo Qabiyyeen ammuma xiqqoo afeyyuu tohachuufii akkasumas namoonni warri TPLF Kontroobaandii, Maalaqaa, Warqii albuudota garagaraa biyyatiin qabduu hindaa tohachuun jecha akkasumas bahuufii galuu Kaadrooni TPLF akka isaani barbadanitti fe´achuu kana dhaabisiisuun dirqama ta´aa. Kana irrati maqaadhaaf akka Boordiitii namoonni Oromoo ta´an waan jiraniif karaa kanaan dhiibbaa gochuu yoo danda´amees irrati hojjachuun barbachisaadha.
← Wayyaanee fi Ummata Sa´aati 24 Paaltokii Irra ta´uu
Konsartii Oromoo Frankfurt Germany irrati →